बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रमा जान मानेनन् चिकित्सक - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । बर्डफ्लु संक्रमणबाट पहिलोपटक मानिसको ज्यान गएपछि स्वास्थ्यकर्मी नै प्रभावित क्षेत्रमा जान डराउन थालेका छन्। गत १५ चैतमा बर्डफ्लुका कारण काभ्रेका २१ वर्षीय युवकको मृत्यु पुष्टि भएपछि सर्वसाधारणसँगै चिकित्सक पनि डराएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार कुखुरा मार्न र औषधिका लागि खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी पनि हच्किन थालेको महाशाखा प्रमुख डा‍. विवेक लालले बताए। ‘विगतमा बर्डफ्लुका विषयमा कसैले चासो राख्दैनथे।
मानिसकै मृत्यु भएपछि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जानकारी लिनेहरू बढेका छन्। संक्रमित क्षेत्रमा खटिन स्वाथ्यकर्मी पनि असहज मान्न थालेका छन्,’ उनले भने। नेपालमा बर्डफ्लु देखिएको १० वर्ष भएको छ । पहिलोपटक ०६५ मा झापाका कुखुरामा देखिएको थियो । सन् १९९६ मा बर्डफ्लु ९एचफाइभएनवन० भाइरस पत्ता लागेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार यो भाइरसबाट सन् २००३ यता विश्वभर आठ सय ६० मानिस संक्रमित भएकोमा चार सय ५४ को ज्यान गएको छ।
सरुवारोग विशेषज्ञ डा‍‍. शेरबहादुर पुनका अनुसार पक्षीमा मात्रै देखिने यो भाइरस वेलावेला मानिसमा सर्ने गर्छ। तर, मानिसबाट मानिसमा भने हालसम्म नसरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । महाशाखा प्रमुख डा। लालका अनुसार एचफाइभएनवान संक्रमणको रोकथामका लागि खोपको विकास भएको छ। तर, यो अझै पनि व्यापक उपयोगका लागि तयार भएको छैन । एन्टिभाइरल औषधिले बिरामीको गम्भीरता घटाउन र मृत्यु रोक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
एआइजीमा बढुवाको लागि आवेदन, को को छन् प्रतिस्पर्धामा ?
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एआईजीमा बढुवा हुनको लागि योग्य डिआईजीहरुलाई आवेदन दिन सूचना जारी गरेको […]
यसरी भूमिका खोज्दै छ सेना
जेठ १ ७ । काठमाडौँ, नेपाली सेनाले विनासकारी भूकम्पपछि सुरु गर्न लागिएको पुननिर्माणसम्बन्धी अभियानमा आफ्नो […]
देवानी तथा फौज्दारीसंहिता सदनमा पेश
काठमाडौँ,विसं १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न पाँच विधेयक व्यवस्थापिका-संसदमा पेस गरिएको छ […]
कानपुर क्याम्पसमा सर्वसहमतिमा स्ववियु घोषणा
बनेपा, १५ फागुन । काभ्रेपलाञ्चोकको दुर्गम क्षेत्र मानिने तिमालको कानपुर क्याम्पसमा शनिबार सर्वसहमतिमा […]
‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पदावधि सडक तोकिनु हुँदैन’
काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पदावधि सडक, सञ्चार र राजनीतिबाट तोक्ने कार्य […]
कारभित्रै किस गर्दा गर्दै दुर्घटनामा परेकी प्रेमिकाको मृत्यु
असार १ । एजेन्सी,कारभित्रै किस गर्दा गर्दै दुर्घटनामा परेकी प्रेमिका केटी बगवेलको मृत्यु भएको छ । ड्राइभ […]